Soavaly Carthusian, iray amin'ireo taranaky ny Andalusian | Soavaly Noti
Soavaly Carthusian, iray amin'ireo taranaky ny Andalusian
Jenny monge | | soavaly, Karazan-tsoavaly
Ilay soavaly Cartujano, antsoina koa hoe «Cerrado en Bocao», dia mahazo io anarana io satria nanomboka nitaiza ny moanina carthusian tao Santa María de la Defensión (Jerez de la Frontera), manodidina ny 1484. Ny toeram-piompiana masitran'ireo moanina dia nandritra ny taonjato telo mahery, iray amin'ireo nankasitrahana indrindra noho ny fampiononany ny fandehanana, ny hakantony, ny fahamendrehany ary ny hajia. Niitatra hatrany amin'ny toerana marika indrindra tamin'izany fotoana izany, toa ny The School of Versailles miaraka amin'i Louis XVI. Ho fanampin'izay, izy ireo dia ireo izay tian'ny emperora, mpanjaka ary emperora.
Ny hazakazaka Carthusian dia a tsipika ao anatin'ny Soavaly Espaniola Purebred (PRE), fantatra koa amin'ny hoe Soalusian Horse. Ireo fitoviana ireo dia mitahiry tahiry fototarazo misy lanja lehibe ho an'ny PRE Na izany aza, tsy izany ihany miavaka amin'ny fananana génétique tena madio satria santionany amin'ity fianakaviana ity ihany no miditra an-tsehatra (noho izany ny anarana "nakatona"), fa koa, amin'ny morfôlôjianina, ny fankamamiana dia ankasitrahana. Karazana karazany manana hatsarana mampiavaka azy araka izay ho hitantsika mandritra ity lahatsoratra ity.
Mahafantatra azy ireo bebe kokoa ve isika?
Mba hahatakarana tsara ny Soavaly Carthusian dia tsy maintsy manisa ny fototry ny Soavaly Andalosiana. Ny Pure Spanish Blood Breed dia vokatry ny fikarohana fahalavorariana estetika sy andriana.
Ao anatin'ny kolontsaina Espaniôla, ny niandohan'ny soavaly sy ny fitaomany dia nifanindry tamin'ny firoborobon'ny sivilizasiôna lehibe voalohany tao amin'ny Saikinosy Iberia. Andeha isika hijery ohatra vitsivitsy: ny Carthaginians dia nampiditra soavaly marobe tamin'ny tafik'izy ireo, nanombatombana ny tanjany sy ny faharetany. Hain'ny Romanina ny mankasitraka ny Soavaly Andalusia ary manatsara azy io ho fitaterana ary ho mampiavaka ny mpanjaka sy ny amperora. Ny maha-zava-dehibe ny fitoviana dia hita taratra amin'ny fijoroana vavolombelona maro nosoratan'ny mpanoratra toa an'i Homer na Pliny.
Soa ihany, ny toetran'ny soavaly Andalosiana dia tsy nisy fiatraikany tamin'ny fanafihan'ny vahoaka Alemanina satria nandeha an-tongotra ny ankamaroany. Ho fanampin'izany, namboarina ny lalàna romana izay notazonina nandritra ny fotoana ela, mba hiarovana ireo mitovy karazana Espaniola ireo.
ve Tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX, raha tao amin'ny Monasiteran'ny La Cartuja dia nipoitra ny fiompiana hantsana misy ny soavaly Andalosiana: Ny soavaly Cartujano. Nandritra ny telonjato taonjato maro, ireto moanina karosia ireto dia namadika ny toeram-piompian'izy ireo ho iray amin'ireo malaza indrindra sy ankafizin'ny fotoana. Nefa ho hitantsika ny tantaran'ireny equines ireny any aoriana, ampahafantaro anay aloha hoe manao ahoana izy ireo.
1 Manao ahoana
Biby an'ny lehibe mitondra, miavaka, miaraka amina hetsika malalaka sy avo, zavatra mahatonga azy ireo irina toy ny studs na dia amin'ny omby tsy miteraka soavaly Carthusian aza.
Miaraka amin'ny hahavony eo amin'ny malazo manodidina ny 160 cm, mitovy izy ireo vatana be volo, miaraka amin'ny tratra lalina sy any aoriana ny hozatra.
Ny hatoka dia manana hozatra tena tsara izay mamela azy hitondra atsangana ilay loha kely mahafinaritra mandritra ny mitaingina. Ahitana taratra a tena kanto endrika sy estetika.
Equine izay izy io dia nifanaraka tamim-pahagagana tamin'ny toetrandro Mediteraneana. Manana vavorona lehibe izy io izay mamela azy miaina tsara amin'ny toetrandro mafana sy mando iainan'ny ankamaroan'ny faritra Mediterane. Ny toetra iray hafa mampifanaraka azy amin'ny toetrandro dia hita ao amin'ny volony. Amin'ireto dia mira ny kapaoty fotsy amin'ny mizana volondavenona sy teboka mainty isan-karazany ampio ny biby tsy ho may amin'ny taratry ny masoandro amin'ny fanaparitahana ny taratry ny kintana nefa tsy manimba ny hoditry ny soavaly. Amin'ny tranga tsy fahita firy dia hita ihany koa ny kapaoty mainty na volontany.
Ho fanampin'izany, nahita toeram-pambolena stud izahay tany avaratry Espana. Teo no nifanaraka ireo mpitaingin-tsoavaly, lasa somary somary somary ambanivohitra kokoa ary mitazona ny hakantony izay mampiavaka an'io karazany io. Ohatra tsara dia ity aseho amin'ny horonantsary etsy ambany ity:
Raha ny toetrany dia miatrika a hazakazaka mendri-kaja sy mendrika, miaraka amin'ny fanehoan-kevitra marina. Mahery sy matanjaka izy io ary malefaka miaraka amin'izay.
Nandritra ny taonjato XV dia nisy fihenan'ny mares tany Andalusia, indrindra noho ny varotra any amin'ny faritra hafa na firenena ary amin'ny famokarana ampondra. Izany dia nanjary Ny filan-kevitry ny tanànan'i Jerez dia mamoaka didy mandrara ny fivarotana an'ireny mares ireny ivelan'ny faritra tsy nahazo alalana avy amin'ny Corregidor. Taty aoriana dia voarara ny nandrakotra ampondra ireo renirano ireo.
Efatra amby roapolo taona taorian'ny fandrarana, ny frera carthusianis an'i Jerez dia namorona ny omby, izany dia hiafara amin'ny fivoarana ary ho lasa «Cartuja» miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana. Izy ireo koa dia ho iza, iza hanavotra ity karazany ity mandritra ny fanafihana frantsay amin'ny alàlan'ny famindrana azy ireo sy fanafenana azy ireo amin'ny toeram-piompiana hafa.
Ny tantaran'ireto equines ireto dia mifangaro amin'ny angano. Ny iray amin'izy ireo dia milaza an'izany ny pretra Pedro José Zapata, mpiompy sy tantsaha tena tsara tamin'izany fotoana izany, manodidina ny 1810 dia nanomboka ny fifantenana an'io karazana soavaly io manomboka amin'ny fividianana soavaly sy soavaly alohan'ny Cartuja de Jerez, izay nitazomana ireo soavaly ireo hatramin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX. ny ny taranak'ireo equines ireo dia nanomboka nantsoina hoe "Hierro de Zapata" ary rehefa ela hantsoina amin'ny fomba ofisialy kokoa izy ireo Cartujano na soavaly Cerrados any Bocao.
Manomboka miparitaka ny hazakazaka. Mpandova an'i Zapata, tamin'ny 1857, dia nivarotra andiana mares sy soavaly tamin'i Vicente Romero, izay hivarotra andiany roa ny zana-drahavaviny iray, ny iray ho an'i Curro Chica ary ny iray kosa ho an'i Juan Pedro Domecq. Ireo mpandova ity dia hivarotra amin'i Roberto Osborne, izay tamin'ny 1949 dia nivarotra ny ankamaroan'ny mpiambina azy tamin'i Fernando de Terry, ary ny ambiny kosa tany amin'ny Marques de Salvatierra sy Juan Manuel Urquijo.
Androany dia afaka manamafy izany isika ny soavaly Carthusian rehetra dia avy amin'ireo omby telo ireo: Urquijo, Terry ary Salvatierra.
Ireo toeram-piompiana stud ireo dia misy a Ny lanja tsy azo ovaina amin'ny fomba fijery sy ny fanatsarana ny Espaniola purebred, satria nijanona nandritra ny taonjato dimy mahery tsy nisy fitaomana ivelany. Ankoatr'izay, Terry's Stud tamin'ny volana martsa 1990 dia lasa ampahany amin'ny Heritage. Taty aoriana, ny volana desambra tamin'io taona io ihany, ny Yeguada Cartujana del Hierro del Bocado dia nahazoana tamin'ny fomba ofisialy avy amin'ny EXPASA, orinasa iray an'ny Heritage State Spanish Heritage.
Ny karazana soavaly Carthusian dia fanehoana lehibe ny fakan'ny Espaniola Thoroughbred. Inona koa, Nandray anjara tamin'ny fananganana sy fanatsarana ny omby malaza eropeana sy amerikana indrindra izy.
Androany, ny Yeguada de La Cartuja dia azo raisina ho tahiry soavaly lehibe indrindra amin'ity karazany ity. Biby roanjato eo ho eo no miompy ao amin'ilay sora-baventy "Hierro del Bocado" noforonin'i Zapata tamin'ny 1810.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Soavaly Carthusian, iray amin'ireo taranaky ny Andalusian
Ratra mahazatra indrindra rehefa mitaingin-tsoavaly
Asturcón, soavaly eoropeana farany